पिपुल्स हाइड्रोको ८२.५ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने - Sankalpa Khabar
| Monday March 8, 2021
1. कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी महिला नेतृत्व
4. मेलम्चीको पानीले वाग्मतीको बहाव बढ्दै, सफाइमा सुधार
5. ओलीले भने जस्तै एमाले गठन सम्भव होला ?
6. विदेश जान्छु भनेर लिएकाे एक लाख ऋणबाट ११ होटलको मालिक
पिपुल्स हाइड्रोको ८२.५ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीले साढे ८२ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले लमजुङमा निर्माणाधीन ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’ जलविद्युत आयोजनामा स्वपुँजी लगानी जुटाउन सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको हो ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ मूल्यको सेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँड गरिने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक केशवबहादुर रायमाझीले बताए । उनका अनुसार निष्कासन हुने यो सेयर स्वपुँजी लगानीको ३० प्रतिशत हो ।
छुट्याइएको सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि हो । स्थानीयका लागि कति र सर्वसाधारणका लागि कति कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भन्नेबारे टुंगो लागिनसकेको उनले बताए ।
‘आयोजनाको ७० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएसकेपछि साधारण सेयर निष्कासनको तयारी गरेका छौं,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि २०७८ बैशाखदेखि बिक्री खुल्ला गर्छौं ।’ उनले कम्पनीको सेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँड गर्न सानिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको जानकारी दिए ।
कम्पनी र सानिमा क्यापिटलबीच सोमबार सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँड सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा कम्पनीकोतर्फबाट रायमाझीले तथा सानिमा क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भिष्मराज चालिसेले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौतापछि अब सानिमा क्यापिटलले सेयर निष्कासन सम्बन्धि प्रक्रिया अघि बढाउने पनि रायमाझीले बताए । कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजना ७० प्रतिशत पूरा भएको छ । आयोजनाबाट अबको ९ महिनामा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादन हुने दोर्दी कोरिडोरको किर्तीपूर सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।
ज्योति लाइफको आइपिओ आजदेखि खुला
२१ फाल्गुन ११:४८
कटाक्षेमा निर्माणाधीन विद्युत्‌गृहको काम तीव्र गतिमा
१८ फाल्गुन १७:३०
मलको अभावमा उत्पादन घट्ने र किसान मर्कामा पर्ने अवस्थाको…
२० फाल्गुन ११:३६
२० फाल्गुन १९:०६
चार जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन
२१ फाल्गुन १२:३२
विदेश जान्छु भनेर लिएकाे एक लाख ऋणबाट ११ होटलको…
२४ फाल्गुन ०८:३९
‘देवाधिदेव पशुपतिनाथ र पशुपतिक्षेत्र’ नामक पुस्तक सार्वजनिक
२४ फाल्गुन १९:५६
२४ फाल्गुन १९:४९
संसद् बैठक बहिष्कार गर्नु गलत हो : बिडारी
२४ फाल्गुन १७:४८
८९ जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप १ जनाको मृत्यु
२४ फाल्गुन १७:४०
एमालेभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने नेपाल समूहको निष्कर्ष
२४ फाल्गुन १७:३४
महिला सुरक्षा र चुनौतीबारे विदेशबाट शीर्ष नेताहरुलाई प्रश्न
२४ फाल्गुन १६:०३